Solosaina fanamainam-bolo matihanina matihanina sy mpamatsy jiro an-dàlam-pandrosoana | Jiro
Vahaolana avo lenta amin'ny jiro / fananganana trano
CHZ dia manolotra portfolio isan-karazany vahaolana famolavolana jiro LED ho an'ny fampiharana sy tontolo iainana marobe, ao anatin'izany ny birao ara-barotra, indostrialy, toeram-pitrandrahana, arabe, maritrano, sns.
Ny jiro arabe CHZ-ST20 flat smd no nitondra ny jiro an-dalambe tamin'ny vidiny mora
Fahazavana eny an-dalambe CHZ-ST20 fantsom-pifamoivoizana nitarika jiro an-dalambe niaraka tamin'ny vidiny mora + https: //chz-lighting.com
ENEC nankatoavina herinaratra jiro vita amin'ny jiro no amidy
ENEC nankasitraka jiro fantsona herinaratra azo amidy https://www.chz-lighting.com/tube-lighting
Ny CHZ no nitarika ny famatsiana fantsona fluorescent ho an'ny toeram-piantsonan'ny fiara ambanin'ny tany
Ny CHZ dia nitarika ny famatsiana fantsona fluorescent ho an'ny toeram-piantsonan'ny fiara ambanin'ny tany https://www.chz-lighting.com/tube-lighting
Tiorka jiro CHZ-LT02-T8 nitarika jiro fantsona T8 tokana na mampifandray fampiasa tsotra
Jiro fantsom-pahefana CHZ-LT02-T8 nitarika jiro fantsona T8 tokana na roa mampifanaraka ny karazana mahazatra https://www.chz-lighting.com/tube-lighting
Manampy ny mpanjifa hisafidy ireo vokatra mety indrindra izahay ary manolotra fanohanana ara-teknika mifanaraka amin'izany aorian'ny fahazoana ny filan'izy ireo amin'ny ankapobeny. Mila manome fampahalalana momba ny injeniera vitsivitsy fotsiny ny mpanjifa. (Raiso ho ohatra ny jiro eny an-dàlana, ny fampahalalana tokony hatolotry ny mpanjifa dia ny sakan'ny làlana, ny halavan'ny andry, ny toerana misy ny tsato-kazo, ny elanelan'ny tsato-kazo, ny ilana hazavana eo ho eo sns.) manolora safidy maro ho an'ny mpanjifa.
Shanghai CHZ Lighting dia mampihatra ny famokarana manara-penitra ary mitondra fifehezana kalitao hentitra mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny jiro LED tsara indrindra, mitahiry fotoana sy vidiny ho an'ny roa tonta ary mitondra tombony lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa.
Shanghai CHZ Lighting Co., Ltd., natsangana tamin'ny 2010, dia orinasa teknolojia avo lenta amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary ny varotra vokatra jiro.
Ny CHZ dia manaraka ny fenitry ny "teknolojia mitarika sy ny kalitao mitarika" ary nametraka R iraisana& D afovoany miaraka amin'i Dr. Chen Dahua, Profesora ao amin'ny Departemantan'ny loharanom-pahazavana elektrika ao amin'ny Oniversite Fudan. Izahay dia mandroso hatrany ny vokatra vaovao ary mitondra ny faharanitan-tsaina ny rafitra jiro. Ny portfolio'ny vokatra dia misy jiro anaty trano, jiro indostrialy, jiro an-tsaha, jiro fanatanjahan-tena, jiro an-dalambe ary jiro amin'ny masoandro. Izahay dia manizingizina amin'ny fampiasana singa avo lenta sy teknika famokarana avo lenta mba hahatonga ny jirontsika tsirairay ho ambony noho ny hafa.